मैतीले पाइन ग्यास चूल्हो — Chetana Online
घोराही, २५ बैशाख । कमजोर आर्थिक अवस्थामा गुज्रिरहेकी घोराही १६ खिरिटियाकी मैती घर्तीलाई ग्याँस चूल्होको खुब रहर थियो । गाउँमा दाउराको अभावका कारण उनलाई खाना पकाउन निकै सास्ती झेल्नु परेको थियो । गाउँ छिमेकमा ग्यास चूल्हो बलेको देखेर उनको मन भने सधैं भक्कानिन्थ्यो । तर के गर्ने ? साथ पैसा थिएन । आफू अपांग । श्रीमान पनि अपांग । साँझ बिहानकै छाक टार्न गाह्रो थियो । यस्तोमा ग्यास चूल्हो मैतीको लागि आकासको फलजस्तै भएको थियो ।
जीवनमा कहिलेकाहिँ आकासको फल पनि प्राप्त हुँदोरहेछ । आज मैतीको लागि त्यस्तै भएको छ । ग्यास चूल्होमा खाना पकाउने उनको सपना साकार भएको छ । यतिबेला मैती दंग छिन्, गद्गद् छिन् । उनको यो सपना लामिछाने–खत्री गर्ग गोत्र समाज दाङका अध्यक्ष युवा व्यवसायी एवं समाजसेवी पदम केसीले पूरा गरिदिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, दाङका पूर्व अध्यक्ष एवं चलचित्र निर्देशक केएल पीडितको समन्वयमा समाजसेवी केसीले विहीबार मैतीकै घरमा पुगी ग्यास चूल्हो र सिलिण्डर प्रदान गरेका छन् ।
केही दिनअघि पत्रककार पीडितले मैतीलाई ग्यास चूल्हो आवश्यक परेको कुरा फेसबुकमा लेखेका थिए । समाजसेवी केसीले सोही पोष्ट पढेर मैतीलाई सहयोग गर्ने आशय राखेर पीडितलाई सम्पर्क गरेका थिए ।
‘मैले केएल पीडितले फेसबुकमा राख्नु भएको सामग्री हेरेको थिए । घरको अवस्था कमजोर र श्रीमान श्रीमती दवै अपांग रहेको परिवारलाई सहयोग गर्नु भित्रै ठूलो धर्म हुने संझेर मैले मैती घर्तीलाई सहयोग गरेको हुँ । मरिलानु के छ र ? मानवसेवा नै जीवन हो ।’ समजसेवी केसीले बताए ।
जिल्लाका बिभिन्न सामाजिक अभियानहरुमा संलग्न केसी दाङ स्थापित समाजसेवी एवं युवा व्यवसायी हुन् । उनले जिल्लामा संचालन हुने प्रायः सबै अभियानहरुलाई सहयोग गरेका छन् । केही दिन पहिले मात्र उनले घोराही उपमहानगर पालिकालाई राहत वितरण अभियानका लागि रु. १ लाख सहयोग गरेका थिए । समाजसेवी केसी मैतीको परिवारलाई अन्य विपतमा सघाउने बताएका छन् ।
मजदूरी गरी घर चलाइरहेकी मैतीका १ श्रीमान र २ छोरा छन् । ग्यास चूल्हो पाए दंग भएकी मैतीले आफ्नो घर बनाउने इच्छा देखाएकी छिन् । उनको आफ्नो घर छैन । अहिले उनी देवरको घरमा बस्दै आएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: May 07, 2020